Mujaahidiinta Alshabaab Oo La Wareegay Gacan Ku Heynta Degmada Galcad. – Calamada.com
Mujaahidiinta Alshabaab Oo La Wareegay Gacan Ku Heynta Degmada Galcad.
Wararka ka imaanaya gobalka Galgaduud ee bartamaha dalka Somali ayaa sheegaya in gabi ahaan saaka ciidamada Kufaarta Xabashida Itoobiya ay isaga carareen degmada Galcad oo ka tirsan gobalka Galgaduud.
Xabashida Kufaarta Itoobiya ayaa shalay ilaa iyo xalay burburinayay diafaacyada ay ka sameysteen degmada’iyagoona saaka si rasmi ah uga cararay degmadaasi.
Ciidamada Xabashida Itoobiya ee ka cararay degmada Galcad ayaa aaday dhanka deegaanka Budbud oo ay horay u sii joogeen askar kale oo Itoobiyaan ah’iyadoona deegaanka Budbud uu dhaca wadada isku xirta degmooyinka Ceelbuur iyo Galcad.
Maleeshiyaatkii dowlada Ridada federaalka ee askarta Kufaarta Xabashida Itoobiya kula sugnaay degmada Galcad ayaa u horay u sii raacay Xabashida ka baxday degmadaasi.
Sidoo kale warar hoose ayaa sheegaya in saacadaha soo socda ay suura gal tahay in Xabashida Injirleyda Itoobiya isaga baxaan deegaanka Budbud oo ay gabi ahaan tooda isugu tagaan degmada Ceelbuur.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin si buuxda ula wareegen gacan ku heynta degmada Galcad oo muddo bilo ah ay duulaan ku joogeen askarta Xabashida Itoobiya.
Saak ayeey aheed markii sidoo kale ciidamada Kufaarta Xabashida Itoobiya isaga carareen deegaanka Buurdhuxulle ee gobalka Bakool oo dhaca dhanka Konfur Galbeed ee dalka Somali.
Previous: Ciidamada Itoobiya Oo Isaga Cararay Deegaanka Buurdhuxulle.
Next: Dhageyso Warka Duhur Ee Andalus 29-09-1437 Hijri.